क्रास्नोडार क्षेत्र कला समूहहरू, विभिन्न थिएटर र प्रतिभाशाली मानिसहरूको अन्य संगतले मा धनी। क्षेत्र ख्याति क्रास्नोडार लागि "Premiere", जो आज यसको संस्थापक एल Gátova को नाउँ वहन पाउनु भएको छ। रचनात्मक संघ के अद्वितीय छ? यसलाई विभिन्न विधाहरू, dissimilar समूह पनि समावेश छ। 14 को आफ्नो कुल, तिनीहरूले6स् मा आफ्नो प्रस्तुति दिन।
बिस्तारै अन्य समूह समावेश जो संगीत थिएटर को संस्थापक, रूस लियोनिद Gatow को जनता कलाकार छ। आफ्नो संगठनात्मक प्रतिभा र कला सम्बन्धित सबै मा अविश्वसनीय प्रवृत्ति धन्यवाद, "Premiere" रूस भर सबैभन्दा प्रसिद्ध रचनात्मक यूनियन छ। आफ्नो भाग अन्तर्गत, त्यो बारेमा दुई दर्जन फरक समूह सामेल भए। यस ब्यालेट कम्पनी, संगीत, puppetry र युवा थिएटर, सिम्फोनिक र कोठामा orchestras, को टुकडी Cossack गीतहरू र अन्य रचनात्मक समूह बनेको "Premiere" को आज क्रास्नोडार थिएटर।
लियोनार्ड Gatow र त्यसपछि "Premiere" को विकास
यो एकीकरण को शुरुवात शो थिएटर, अझै पनि पूर्ण घरहरू भेला, शहर मा सफलतापूर्वक संचालित जो राख्नु भएको थियो। यो 1990 मा गठन भएको थियो, यसको कलात्मक निर्देशक र सीईओ लियोनार्ड जी Gatow भयो। एक bandleader, विभिन्न डीसी, निर्देशक-निर्माता थियो रूपमा यो शानदार मानिसले आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर सुरु भयो। उहाँले मे 1990 मा क्रास्नोडार मा "Premiere" थिएटर नेतृत्व। एल Gatov रूस जनता कलाकार गर्न सामान्य क्लब को टाउको देखि भयो। आफ्नो लगनशील भई लागिरहेमा र रचनात्मक संघ "Premiere" को अथक ऊर्जा मात्र धन्यवाद एक विविध बन्न व्यवस्थित र धेरै अन्य रचनात्मक समूह संयुक्त छ। लियोनार्ड जी को कलात्मक कर्मचारी एक अनुभवी कलात्मक र व्यवस्थापन टोली छान्न र पूरक गर्न प्रयास धेरै exerted।
संरचना रचनात्मक संघ "Premiere"
आज रूस मा, र "Premiere" समान हुनेछ जो रचनात्मक टीम, पाउन। यो कला, आत्म-पर्याप्त साम्राज्य, ठूलो जादू गर्न सक्षम एक शक्तिशाली समूहको।
को क्रास्नोडार थिएटर को टाउको "Premiere" एल Gatov हठी आफ्नो लक्ष्यमा, रूस र आफ्नो पैतृक KUBAN को संस्कृति अर्थपूर्ण गर्दा expertly, नयाँ हाइट्स गर्न सामूहिक सम्बद्धता उठाएर भयो। उहाँ र उहाँका सहकर्मी निरन्तर नयाँ संगीतकार, गायक, प्रसिद्ध निर्देशक, कोरियोग्राफरहरू र प्रसिद्ध कलाकार आकर्षित गर्न, यस नाटकीय मुग्ध पार्ने संगीतको सुधार गर्न काम गर्दै छन्। हामी चिरपरिचित संगीतकार र रूसी संस्कृति को तथ्याङ्कले उपस्थित थियो जो धेरै नाटकीय र शैक्षिक परियोजनाहरु, को निर्देशन अन्तर्गत बाहिर।
को निर्देशक, उत्पादन डिजाइनर, जवान र लोकप्रिय गायक, अभिनेता: यसरी, क्रास्नोडार मा देश को सबै भन्दा राम्रो रचनात्मक सेना भेला गर्न थाले। Garanyan जी,: सङ्घको रचनात्मक योजना प्राप्ति प्रसिद्ध थिएटर-goers मदत शापिरो, यूरी Grigorovich, पी Chomsky र अरूलाई।
क्रास्नोडार सांगीतिक थिएटर बारेमा
यो थिएटर को KUBAN मा पुरानो थिएटर छ। एक dizzying सफलता, यूपीएस, कठिन समयमा: उहाँले यसको इतिहास यो सबै समयमा अनुभव। धेरै पटक क्रास्नोडार सांगीतिक थिएटर एक उच्च गर्न, सबै समय यसको स्थिति परिवर्तन भयो। 2002 मा, उनले "Premiere" साथ दिए। यसको प्रेक्षालय 1256 दर्शक राखिएको छ।
क्रास्नोडार मा "Premiere" सांगीतिक थिएटर आवश्यक सबै संग सुसज्जित छ। त्यहाँ आधुनिक उपकरण को एक पूर्ण सेट छ, यो मात्र होइन प्रकाश, ध्वनि, तर पनि हल्का प्रभाव सिर्जना गर्न लेजर सिस्टम छ। त्यहाँ एक थिएटर सिलाई, DEKOR दोकान छ। आफ्नो निपटान र पूर्वाभ्यास ब्यालेट कक्षाहरू मा। को थिएटर को कलात्मक निर्देशक अब लवव-Belov Alexey, रूस को संस्कृति को बडे कार्यकर्ता छ।
आधुनिक मुग्ध पार्ने संगीतको
रचनात्मक संघ "Premiere" दर्शक गर्न कार्यक्रम को एक किसिम प्रस्तुत। को थिएटर संग सफलतापूर्वक क्रास्नोडार मा एक शक्तिशाली प्राविधिक सेवा र रूस को अन्य शहर, र धेरै युरोपेली देशहरूमा प्रदर्शन। पनि मृत्यु Leonida Gatova पछि उहाँले बढ्न र फस्टाउन, को "Premiere" प्रत्यक्ष क्रास्नोडार थिएटर मा सिर्जना गरियो। प्रत्येक नयाँ सिजन, दर्शकहरूलाई नाटकीय प्रदर्शन, हास्य, ब्यालेट, शास्त्रीय ओपेरा रूपमा साथै कुनै एक विधा मा फिट छैन त्यसो दुवै आधुनिक syncretic निर्माण आनन्द। ठूलो ध्यान संगीत कार्यक्रम भुक्तान छ - एक असामान्य र धेरै रोचक।
क्रास्नोडार रचनात्मक संघ "Premiere" एल जी Gatova नाम सडक लाल, 44 प्रत्येक स्थानीय बासिन्दाहरूले क्रास्नोडार र यसको हल को ठेगाना मा चिरपरिचित थिएटर "Premiere" मा स्थित। "Premiere" केही थिएटर र कलात्मक समूहहरूको लागि मुख्य कन्सर्ट स्थल र पूर्वाभ्यास आधार सडक मा कला को महल छ। Stasov, 175।
कहाँ र कसरी जहाजहरु जाँच गर्न? एमआर जहाजहरु
ध्वनिक गिटार Hohner: समीक्षा